You are at:Home»Ongororo»Maporofita haadaro!
By Munyori weKwayedza on	 November 3, 2017 · Ongororo
Muporofita, kupengesa mwana wake chaiye? Ko kuzoti mumwe munhuwo zvake? Izvi zvichiitwa nemunhu anozviti anoshanda nemweya waMwari!
Vanhu ngavarege kutamba nezita raMwari kusvika pakadai!
Bhaibheri rinoti kana munhu akatadzirwa, kudzorera ndekwaMwari. Zvino kana munhu odzorera chitadzo nechimwe chitadzo anenge asiri kuzviita “kamwari” kadiki here?